मासु खानु स्वास्थ्याका लागी किन खतरनाक छ ? जानिराख्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
मानिसको शरीरलाई मासुले राम्रो पटक्कै गर्दैन। नयाँ अनुसन्धानहरु मासुमा पाइने प्रोटिन स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुने बताउँछ। ‘अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिसन’मा प्रकाशित एक खोजमा वनस्पति प्रोटिनको
सेवन गर्न भन्दा प्राणीको शरीरमा पाइने (अर्थात मासु तथा डेरी उत्पादनमा पाइने) प्रोटिन सेवनको गर्ने बढी मृत्युको जोखिममा हुने उल्लेख गरिएको छ।
अधिकतम मासु सेवन गर्नेहरुमा टाइप २ मधुमेह, मटु सम्बन्धि रोग वा क्यान्सर बढी देखिएको छ। जसले आफ्नो प्रोटिनको स्रोत मासु बनाउँछ, अन्यको तुलनामा उ २३% बढी मृत्युको जोखिममा हुन्छ। अनुसन्धानमा मासु र डेरी उत्पादन सेवन गर्ने, र शाकाहारी खाद्यपदार्थ मात्र सेवन गर्नेहरु संलग्न थिए। मांसहारीहरुमा रातो मासु सेवन गर्ने ज्यादा थिए।
केवल जनावरको मासुमा पाइन्छ। यसलाई मानव शरिरले पचाउन सक्दैन। यसले क्यान्सर र मुटुको रोग निम्त्याउन भूमिका खेल्छ। मानव शरिरमा पाइने सबैखाले ट्युमरमा यो एसिड भेटिने गर्छ। यसले उत्पन्न गराउने जलनले ट्युमर बढाउने र आर्टरीहरु कडा पार्ने
साथै मासुले फोक्सोमा जलन गराउँछ। साथै केही घण्टामा नै यसले मुटुका भल्भहरु कडा बनाइदिन्छ। मासु खानु अन्तत: मुटु रोग निम्त्याउनु हो।
४० प्रकारका मासु परिक्षण गर्दा यसले शरिरमा ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या बढाउने देखिएको छ। मासु खाएको केही घण्टामा नै रगतमा ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या अधिक बढ्छ। यस्ता ब्याक्टेरियाहरु चर्को आगोमा पकाएका मासुमा पनि भेटियो। साथै यी व्याक्टेरिया लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने र शरिरका उत्पन्न हुने पाचनरसले समेत मार्न सक्दैन्।
साथै मासुमा पाइने यी रसायनहरुले मानसिक जलन गराउने देखिन्छ। मासु खाने व्यक्ति नखाने भन्दा शान्त र
तनाव रहित जीवन बिताउँछ।
रातो मासु खाने यी हुन् सही तरीका :
दशैंमा रातो मासुको खपत बढी हुने गर्छ । विशेषगरी, खसी, बोका, भेडा र च्यांग्राको मासु दशैंमा अन्य बेलाको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म बढी खपत हुन्छ ।
रातो मासुको अत्यधिक सेवनले तौल बढ्नुका साथै बोसो लाग्ने गर्छ । त्यसबाट बच्न सही तरीका अपनाउनु जरुरी छ ।
प्रोटिनको मुख्य आधार मानिने रातो मासुमा बोसोको मात्रा अधिक हुन्छ । यस्ता मासु मनपरि तरीकाले सेवन गर्दा तौल बढ्छ । त्यसका लागि मासु काट्दै ध्यान दिनुपर्छ ।
सकेसम्म बोसो तथा छालारहित मासु छनोट गर्नुपर्छ । छातिको मासुमा बोसो कम हुन्छ ।
बिनाडाइटिङ शरीरको तौल घटाउने अर्को उपाय भनेको क्यालोरीयुक्त खानेकुरा कम गर्नु हो ।
एक अध्ययनका अनुसार एउटा मानिसले दिनमा आफूले लिने पाँच सय क्यालोरी कम गर्दा सातामा करिब एक पाउन्ड घटाउन सकिन्छ ।
शरीरको अतिरिक्त तौल कम गर्न पौष्टिक आहारमा सन्तुलन आवश्यक छ । त्यसका लागि भिटामिन, मिनरल्सलाई सन्तुलित ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार रातो मासु सेवन गर्ने मानिसले तौल बढ्न नदिन प्रशस्त मात्रामा दूध, दही, प्रोटिन, फलफूल, सागसब्जी र अनाज सेवन गर्नु जरुरी छ ।
बोसोरहित मासुका साथमा पोषकतत्वको दैनिक सेवनले कोलेस्ट्रोलको उतारचढावलाई नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।
मासु पकाउँदा त्यसको विधिबारे ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले मासुमा भएको सबै बोसो हटाउनुपर्छ ।
सकेसम्म गि्रल गरेको र उसिनेको मासुको सेवन उत्तम हुन्छ । यदि तपाईं तारेको वा पोलेको मासु खान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसमा भएको बोसो तथा चिल्लोपनालाई हटाउनु आवश्यक हुन्छ ।
मासु खाँदै हुनुहुन्छ? यी कुरा ख्याल गर्नुस्
दसैँको रौनक घरसम्म आइपुगेको छ। दसैँका लागि घरजाने क्रम सुरु भएको छ। रातो टीका र जमराको पर्वको रुपमा चिनिने दसैँमा खानपानको पनि उत्तिकै महत्व छ। दसैँ भन्नेबित्तिकै मासुको कुरा पनि आइहाल्छ। दसैँमा पेटभरि मासु नखाए कहिले खाने भन्नेहरु धेरै छन्। तर दसैँमा मासु र अन्य खानेकुरा खाँदा बिरामी मात्र होइन स्वस्थ मानिस पनि बिरामी बन्ने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ। खानपिनमा ध्यान नदिँदा धेरै नागरिक दसैँंका समयमा अस्पतालमा पुग्ने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए।
दसैँको रौनक घरसम्म आइपुगेको छ। दसैँका लागि घरजाने क्रम सुरु भएको छ। रातो टीका र जमराको पर्वको रुपमा चिनिने दसैँमा खानपानको पनि उत्तिकै महत्व छ। दसैँ भन्नेबित्तिकै मासुको कुरा पनि आइहाल्छ।
दसैँमा पेटभरि मासु नखाए कहिले खाने भन्नेहरु धेरै छन्। तर दसैँमा मासु र अन्य खानेकुरा खाँदा बिरामी मात्र होइन स्वस्थ मानिस पनि बिरामी बन्ने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ। खानपिनमा ध्यान नदिँदा धेरै नागरिक दसैँंका समयमा अस्पतालमा पुग्ने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए।
खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दसैँंको समयमा उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका साथै झाडाबान्ता हुने, कब्जियत हुने, युरिक एसिड बढ्ने तथा ग्यास्ट्रिकका बिरामीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने गरेको उनले बताए। ‘एकै पटक धेरै मासु पकाएर धेरै दिनसम्म खाँदा त्यसबाट रोगलाई बढावा दिनेबाहेक अन्य केही पाइदैन,’उनले भने।
झक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा रोशन प्रजापतिले रातो मासु पोलेर, धेरै भुटेर वा तारेर खाँदा क्यान्सरको खतरालाई बढाउने बताए। उनले भने,’दसैँमा मासु खाँदै नखाने भनी रोक्न सकिँदैन तर खाँदा सावधानी भने अपनाउनुपर्छ। बासी नखाने, सागसब्जी, गेडागुडी पनि खानामा समावेश गर्ने बरु कुखुराको मासु, माछाको मासु खाने पनि गर्न सकिन्छ।’
क्यान्सरका बिरामीले खसीको मासु एकै पटक खानुभन्दा साधारण तरिकाले पकाएको थोरै मात्र प्रयोग गर्ने र पोलेको, डढेको वा धेरै भुटेको मासु भने खाँदै नखान उहाँको सल्लाह छ। मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा ज्योति भट्टराई भने दसैँमा खानै पर्छ भनी खसीको धेरै मासु एकै पटक नखान सल्लाह दिन्छन्। उनले एक छाकमा तीन, चार टुक्रा मात्र मासु खाने, कोक, फेन्टाजस्ता पेय पदार्थलाई भन्दा पानीलाई प्राथमिकता दिन, हरियो तरकारीलाई खानामा समावेश गर्न र मासुको मात्र भर नपर्न सल्लाह दिए।
अनियन्त्रित खानपानले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा भई मधुमेह मात्र नभई अन्य रोगलाई पनि बढावा दिने डा भट्टराईको भनाइ छ। वरिष्ठ पोषणविद् डा अरुणा उप्रेती दसैँमा दीर्घरोगीले विशेष गरी खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्।
उनले ताजा र सफा मासु किन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। ‘मासु पकाउँदा धरै चिल्लो, मसला राखी भन्दा पनि साधारण तरिका अपनाउनु पर्छ। अन्यथा अपच हुने, बान्ता हुने, धेरै बासी मासुले आउँ हैजाजस्ता समस्या हुने गर्छ,’उनले भने।
मासु खानुका बेफाइदा जानिराख्नुस् :
आजकल धेरै मानिसहरू स्वास्थ्यका लागि मांसाहार छोडिरहेका छन् । शाकाहारीको संख्या बढिरहेको छ ।
हुन त मासुको नाम सुन्नेबित्तिकै धेरैको –याल चुहिन्छ तर स्वादिष्ट भएपनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक नै हुन्छ । यहाँ हामी यसका हानिहरू बताउँछौं ।
मासु खाने धेरैजसो मानिसहरू चिढिइरहन्छन् र जतिखेर पनि रिसाइरहन्छन् । यिनीहरूको स्वभाव पनि उग्र हुन्छ । मासु खाँदा तपाईंको शरीर र मन दुवै अस्वस्थ रहन्छ ।
मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा गम्भीर रोगको बढी शिकार हुन्छन् । यी रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला बिग्रने, बाथ र अल्सर पर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार, मांसाहारले धूम्रपानजत्तिकै हानि गर्छ । मासु खानेलाई क्यान्सरको खतरा बढी हुन्छ ।
शाकाहारी स्वस्थ, दीर्घायु, निरोगी र तन्दुरस्त हुन्छ । बर्ड फ्लु र स्वाइन फ्लु जस्ता रोग मासु खानेलाई नै लाग्छ । संसारको एक चौथाइ प्रदूषणको कारण मासु नै हो । मानिसहरूले मासु खान छोड्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म प्रदूषण कम हुन्छ । मासुका लागि हुर्काइने जनावरले अत्यधिक पानी र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरिदिन्छन् ।
मासु खाने मानिसको उमेर पनि छोटो हुन्छ । मासु महंगो पनि छ । यसमा पैसा खर्च गर्नुको साटो अरू कुनै असल काममा लगाउनुस् ।
मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा डिप्रेसनको शिकार बढी हुन्छन् । मासु पचाउन धेरै समय लाग्छ । मान्छेको आन्द्रा हिंस्रक जनावरको जस्तो ठूलो हुँदैन त्यसैले मासु पचाउन मुश्किल पर्छ ।
हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि मासु नखानू भन्छ । गीताका अनुसार, मांसाहार राक्षसी गुण भएका मानिसले खान्छन् । मासु र रक्सी तामसिक भोजन हुन् । यस्ता मानिस पानी, कुकर्मी, दुःखी, अल्छी र रोगी हुन्छन् ।
Don't Miss it भिटामिनले भरिपूर्ण फल : गर्मीमा काँक्रो खानुको फाईदै फाईदा
Up Next अपुरो निन्द्राले हाम्रो स्वास्थ्यमा डरलाग्दा रोगहरु निम्त्याउछ थाहा नभए एकचोटि पढ्नुहोस्
यी ५ वटा कुरामा ध्यान दिए डायबिटिज रोक्न सकिन्छ, थाहा पाइराखौँ
दिनभरि हामी यस्ता कयौँ गलत बानीलाई पछ्याउने गर्दछौँ, जसको कारण शरीरको ब्लड शुगर लेभल बढ्न थाल्छ । केही समय पछि…